Donald Trump ny fiadanana tolo-kevitra: New Palestina | Apg29
Donald Trump ny fiadanana tolo-kevitra: New Palestina
Araka ny vaovao tafaporitsaka, ny filoha US, Donald Trump miaraka amin'ny soso-kevitra ho an'ny nihavana ny Isiraely sy Palestina.
Eo ambany ny soso-kevitra , ny fanjakana "New Palestina" dia haorina ahitana Gaza sy ny West Bank.
New Palestina tsy manana tafika, dia hanatsoaka hevitra fa ny fiarovana fanekena tamin'ny Isiraely. Ny lalambe no haorina eo Gaza sy Cisjordanie, ary lalana roa ho any Jordana. Ary ny fari-taniny amin'ny Jordana dia ho fehezina amin'ny Israely.
Raha tsy misy fifanarahana dia nanao sonia , ny US dia hampiato ny fanampiana ara-bola ho an'ny Isiraely sy Palestina hatokana toerana ara-toekarena.
Raha afa-tsy ny Palestiniana ao Gaza governemanta dia tsy sonia, ny Etazonia no hiady ny governemanta Gaza sy ny fanohanana ny Isiraely.
Faminaniana ho tanteraka
Isika dia miaina lavitra amin'ny hoavy izay ny faminaniana ara-baiboly tanteraka. Zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay fa nandray an'i Jesosy mba voavonjy sy vonona na inona na inona mitranga.
Tsy ho ela, i Jesosy dia hiverina!